EX - ABSDF: သတိပြုနိုင်စေဖို့ ....
ခုပဲ ကိုယ့်အချင်းချင်းထဲက အချိန်ကိုက် အရောင်အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတဲ့လူတွေကိုပြန်ကြည့်နေတာ ၊ ပြောသာပြောတာ သူတို့လဲ ကိုယ့်ကို အဲဒီလိုပဲမြင်မှာပဲ၊ ဒီလူကြီး အရင်တုန်းက ငါတို့နဲ့အတူပါလို့ပေါ့၊
အဲဒီလိုဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာ တဦးတယောက်ထဲလုပ်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူး၊ Symphony တီးဝိုင်းကြီး တခု လို ကိုယ်တွေထဲ ပါးနပ်တဲ့ အရောင်ပြောင်း ပုတ်သင်(Cameleon)တွေ စနစ်တကျထည့်ပြီး လှည့်ကွက်ထဲ ဆွဲခေါ်သွားခဲ့တာပါ။
(၁) BBC web site မှာ မြန်မာပြည်မြေပုံ တိုင်းရင်းသားအမည်တွေ Legend ပုံနဲ့ စာထိုးရာ Rohinja ပုံနဲ့စာ မှားထိုးရာက စပြီး အင်အားယူ အတိုက်အခံ Media အားလုံးကို အယုံအကြည်မဲ့သွားအောင် Ochestoring စလုပ်လာခဲ့တယ်။
စမှားသွားတာက BBC ဟာ မြန်မာပြည်မြေပုံမှာ Rohingya ကို Ethanic Minority Group အနေနဲ့ Global View အရ စာတန်းထိုး ပုံထည့်သွင်းဖေါ်ပြလိုက်တာပါပဲ။
>>> http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11595983 <<<
6 November 2010 Last updated at 02:04 GMT
အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျနော်တို့ဘက်က တက်လာတာ...
>>> http://globalvoicesonline.org/2011/10/29/myanmar-netizens-to-bbc-apologize-now/ <<<
Written by Chan Myae Khine
Chan Myae Khine regularly curates and reports about Myanmar on Global Voices and is studyingapost graduate degree in Law in Singapore according to web address.
Burma hasanew non-headline-making, yet popular, political event. The BBC Burmese Service has come under intense pressure from ethnic Arakan regarding Anna Jones’ article “Bleak outlook for Burma’s ethnic groups“. The article, which appeared in November 2010 in the Asia Pacific Section, includedamap of Burma in which Arakan state was identified withaphoto of ethnic Rohingya children. The article also referred to Muslim Rohingya as an ethnic group of Burma as opposed to Buddhist Arakan’s assumption of them as illegal aliens from Bangladesh.
By Sai Latt, Guest Contributor
–3November 2011
>>> http://lamadawphotoat.blogspot.sg/2012/05/bbc-is-cheatingvoa-is-cozeningdvb-is.html <<<
Blogger Name : lamadawphotoat
ရက်စွဲ- Monday, May 28, 2012
In his About Me....
If, You want to read Myanmar artical,Myanmar long noval and personal history of Myanmar famous People.
If, You want to know Myanmar Army,Myanmar made small arms,Myanmar made heavy weapons and about of Myanmar Army.
If, You want to view Myanmar Model Photo,Myanmar Historic Photo and Photo of Myanmar Famous People.
If, You want to look Myanmar politics movie,Myanmar video,Myanmar song and Myanmar Historic movie.
စမှားသွားတာက BBC ဟာ မြန်မာပြည်မြေပုံမှာ Rohingya ကို Ethanic Minority Group အနေနဲ့ Global View အဖြစ်တင်လိုက်မိရာမှာ မှားသွားတာပါ၊
အဲဒီနေရာမှာ စတင်ပြီး အတိုက်အခံအဖြစ်ရပ်တည်တဲ့ BBC, VOA, RFA, DBV Media တွေကို အစိုးရရဲ့ Proxies တွေက မြန်မာလူထုနဲ့ ခွဲထုတ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရသွားပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ၊် ကျောက်နီမှော် ကျေးရွာက မသီတာထွေး မဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကနေ စပြီး ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာ အရေးအခင်း တောမီးတခုလို ဖြစ်ပွားလောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။
Rape and Murder Victim Thida Htwe(www.arakanlaywaddy.com)
Following news released on the June 5th New Light of Myanmar newspaper details the brutal rape and murder and sexual-mutilation ofaMyanmar village woman by three Bengali-Muslim men in the Ramree Township of the Arrakan State.
>>> http://lamadawphotoat.blogspot.sg/2012/06/rape-and-murder-victim-thida-htwe.html <<<
ရက်စွဲ- Sunday, June 10, 2012
ဆက်ပြီး ဓါတ်ပုံရဲ့ အဓိက ပင်ရင်းဖြစ်တဲ့ www.arakanlaywaddy.com ရဲ့ IP address အရ လိုက်ကြည့်တဲ့အခါ အမေရိကန်နိုင်ငံ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ဘာလင်တန်မြို့က နေရာတခုကိုပြပါတယ်။
Latitude: 42.5051 (42° 30′ 18.36″ N)
Longitude: -71.2047 (71° 12′ 16.92″ W)
ဒါလဲ Proxy ခံသုံးရင် ခြေရာခံ မမှန်တတ်ပါဘူး၊
ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာ အရေးအခင်းပေါ် မူတည်ပြီး OIC ရုံးကိစ္စမှာ မြန်မာအစိုးရဟာ ပြည်တွင်းမှာ မျက်နှာပန်းလ၊ှ လူထုအားကိုးရတဲ့ အနေအထားကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲအရှိန်နဲ့ မြန်မာ-ကုလား၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ-မွတ်စလင် အရေးအခင်းတွေ ဖေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ တိုးချဲ့ အကွက်ချ စီစဉ်လာခဲ့ပါတယ်၊
ပြီးခဲ့တဲ့ မိတ္တီလာမြို့မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရေး အပေါ် Online Media တချို့တွေဟာ ဘယ်လိုဦးတည်လှုံ့ဆော်မှုတွေရှိခဲ့ပါသလဲ...
အောက်က Screen Shot ဖမ်းထားတဲ့ နေရာမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်
("၉၆၉" လှုံဆော်မှုများ မိတ္ထီလာမြို့အရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော် ထောက်ပို့ပေးသော Media များ)
>>> https://www.facebook.com/lucifer10131015/posts/534647683245824 <<<
(မှတ်ချက်။ ။ နီးစပ်ရာ "လက်တို့ပြီးတော့ ပြောရအုံးမယ်" ဆိုတဲ့ ပါးစပ်သတင်း၊ စာသတင်း၊ ဖုန်းသတင်း၊ email သတင်းများ မမှန်းနိုင်အောင်ရှိပါမည်။)
သတင်း တင်တဲ့ Fan တွေအနေနဲ့က အောက်ပါအတိုင်း အများအပြားပြိုင်တူ လိုလို တင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Future Foundation in Myanmar
Myanmar Defense League - MDL
Voices From FB Myanmar
စောက်အလ္လာ နှင့် လီးမိုဟာမက်
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းတာဖြင့် ရှိသမျှ ကုလားအားလုံးကို သုတ်သင်နှိမ်နင်းရေး
ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း__နည်းပညာ - ဗပာုသုတ_နှင့်_စောက်ကုလားများအကြောင်း
တချို့ သတင်း Fan တွေကတော့ သတင်းတင်လိုဇောနဲ့ သတင်းရင်းမြစ် မှန်ကန်မှုကို ဂရုမစိုက်နိုင်ပဲ တင်လိုက်တာမျိုးပါခဲ့ပါတယ်၊ ဒါက မီးတကယ်မလောင်ဘူး မဆိုလိုပါ၊ ရည်ရွယ်၍ဖြစ်စေ မရည်ရွယ်၍ဖြစ်စေ လေပင့်မိခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းကိုပြောတာပါ။
ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရခိုင် နှင့် ဘင်္ဂလီအရေးဟာလဲ မတူညီတဲ့ လူသားမျိုးနွယ်စု ပဋိပက္ခအသွင်ရှိခဲ့တာပါ၊ ယနေ့ ကြုံတွေ့လာရတဲ့ ပဋိပက္ခဟာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် အစ္စလမ်ဘာသာ ပဋိပက္ခအသွင် တဖြေးဖြေး အသွင်ပြောင်း အရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါပြီ၊
ဘယ်လို လှုံ့ဆော်စည်းရုံးမှုတွေက ဒီလိုဘာသာရေး ပဋိပက္ခအဖြစ် တွန်းအားပေးလာခဲ့ပါသလဲ၊
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဘက်က အပြောင်းအလဲကို မသိနိုင်ပေမဲ့ ကျုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ တဖြေးဖြေးပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို "၉၆၉" တံဆိပ်ထွင်ပြီး အစ္စလမ်ဘာသာ ရဲ့ "၇၈၆" ကို ရန်ဆိုင်လာတဲ့ သဘောတွေ့လာရလို့ပါပဲ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အားလုံးကို မဆိုလိုပါ၊
("၉၆၉" လှုံဆော်မှုသူများ၏ မိတ္ထီလာမြို့အရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော် လောင်စာဆီ စုပေးသော Fan Page များ)
မိတ္ထီလာအရေးမှာ လောင်စာဆီ စုပေးနေသူတွေဟာ အသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့ကြရမှာပါ၊
>> ရခိုင် နှင့် ဘင်္ဂလီ အရေးမှာ စိတ်မအေးငြိမ်းနိုင်တော့တဲ့ သူတချို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မူရင်းအနှစ်သာရ အသွင်ပြောင်းပြီး အစ္စလမ်ဘာသာနဲ့ ရန်ဆိုင်ပေးဖို့ တဖြေးဖြေး အားထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။
>> တချို့ကတော့ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းကနေ မျက်ကန်းချစ်စိတ်ကြောင့် နိုင်ငံရေး မျက်နှာစာပိုမို အလေးသာလာတဲ့သဘော သိရှိသွားသူတွေလဲ ခုမိတ္ထီလာအရေးမှာ အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်လာတာ တွေ့နေရပါတယ်။
>> တချို့ကတော့ ယခင်အစိုးရလက်ထက်က မတရားရယူပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တဲ့ ဥစ္စာဓနနဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ခေတ်အပြောင်းအလဲမှာ ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးသွားမှာ စိုးရိမ်ကြလို့ ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြတာလဲ တွေ့နေရပါတယ်။
>> တချို့ကတော့ တကယ်လို့အရပ်သားစစ်စစ် အစိုးရသာဖြစ်လာခဲ့ရင် အရပ်ဖက်ဋ္ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း အရာရှိနေရာတွေကို မိုးကျရွှေကိုအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ပိုခက်ခဲသွားမှာ စိုးရိမ်ကြလို့ ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြတာလဲ တွေ့နေရပါတယ်။
>> တချို့ကတော့ စစ်အစိုးရလက်ထက် မိဘများ ခေတ်ပျက်သူဋ္ဌေးအဖြစ် ချမ်းသာလာမှုကြောင့် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် ကျောင်းတက် အလုပ်လုပ်၍ မိမိတို့ဘဝ အဆင်ပြေခဲ့သော ခေတ်ကိုသာ ရှိနေစေလိုသော စိတ်ဖြင့် ပူးပေါင်းလာကြတာမျိုးလဲ တွေ့နေရပါတယ်။
>> တချို့ကတော့ ပြောသမျှ ဟောသမျှ ကြားသမျှ မိမိဆင်ခြင်ဥာဏ်ကို ထုတ်မသုံးပဲ ယုံကြည်ပြီး ပါဝင်လာတဲ့ သူတွေပါ။
>> အမျိုးချစ်ဖို့ ဘာသာချစ်ဖို့ဟောရင် သည်းချေကြိုက်တရားမို့ လဘ်လာဘလဲပွင့် အရှိန်အဝါလဲပိုကြီးမားလာမယ် အထင်နဲ့ ဘာသာရေးနိုင်ငံ ထူထောင်ဖို့စိတ်ကူးယဉ် အားထုတ်လာသူတွေလဲ ရှိလာပါတယ်။
အဲဒီ နောက်ပိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေက..သိရှိပြီး ဖြစ်မယ်ယူဆလို့မရေးလိုတော့ပါ၊
အဲဒီတော့ ကိုယ့်အနား ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်က ဒီမှာဟေ့.... ဒီမှာ၊ ဒါဟေ့.....ဒါ၊ ချကြကွ....ချကြ၊ ဆိုတိုင်း သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လောက်တယ်၊ ငါလဲ ရှယ်လိုက်မယ်၊ ဆဲလိုက်မယ် ချကွာ၊ လိုက်မလုပ်ကြဖို့ ပြောလိုပါတယ်၊ စဉ်းစားဥာဏ် သုံးကြပါ၊
ကျနော်တို့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ အရောင်ပြောင်း ပုတ်သင်(Cameleon) တွေ ရှိနေပါတယ်၊
တကယ့် အရေးအကြောင်း အချိန်တွေမှာ ကမီးလီယန်တွေ ထပ်ပြီးမွေးမြူစေလွှတ်ကြအုံးမှာပါ။
မိတ်ဆွေများအားလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
Posted by lu bo at 7:51 PM